Dokotera TINA ZHY Mazava ny handresen’i Marc Ravalomanana
Hatreto dia tsikaritra eny anivon’ny fiaraha-monina eny hoy dokotera Tina Zhy fa tsy iadian-kevitra ny handresen’ny kandidà Marc Ravalomanana amin’ny Fifidianana fihodinana faharoa hotanterahina rahampitso Alarobia 19 Desambra. Ny teti-dratsy hangalara-bato sisa no mila arahi-maso sy fehezina tsara, hoy izy.
Sehon-javatra telo raha araka ny nambarany no hanaporofoana fa mankany amin’ny kandidà Marc Ravalomanana ny safidin’ny olom-pirenena maro an’isa. Tamin’ny fifanatrehana voalohany notanterahin’ireo kandida roa dia nambarany fa nahatarafana zavatra maro izany izay vao mainka nanamafy ny fitiavan’ny olona ny kandida laharana faha-25 nefa nanalabaraka ny an-daniny. Anisan’ireny hoy izy fahatsoran’ny kandida Ravalomanana raha nisy fankahalàna sy avona kosa ny fihetsika sy fiteny nasehon’ny an-kilany ary nandray ny mpifanandrina ho fahavalo mihitsy na dia atao hoe Raiamandreny sy zanaka aza. Nahatsapa ny tsy fahamendrehany anefa ny ankilany nandritra izany hoy izy ka ny hany nataony dia ny tsy namaly mivantana na tsy namaly mihitsy ny fanontaniana napetraka taminy fa variana nanaratsy ny an-daniny fotsiny. Ny fifanatrehana farany afaka omaly alahady indray dia nambaran’ny dokotera Zhy fa tena voafehin’ny kandida Ravalomanana ny zava-drehetra. Niharihary ny maha-raiamandreny sy Filoha mendrika ity kandida iray ity hoy izy. Naka tahaka sy mandika izay voalazan’ny laharana faha-25 fotsiny kosa hoy izy no nataon’ny an-daniny izay vao mainka nampihiratra ny masom-panahin’ny Malagasy rehetra.
Legende : Izy no dokotera Zhy Andrianarisaina